XOG+DAAWO: Al- Shabaab ma lacag ayay qaateen si loo bilaabo dhismaha Laamiga isku xiraya Muqdisho & Jowhar?
MUQDISHO(P-TIMES) – Mashruuca Dibu dhiska wadada laamiga ah ee isku xirta Muqdisho & Jowhar ayaa dib loo bilaabay, taas oo ahayd deeq ay dawladda Qadar ugu talo-gashay Soomaaliya, waxaana Mashruucan ku baxaysa Aduun gaaraya 220Malyan, sidda ay sheegtay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana qandaraaska qaadatay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Al- Shabaab ayaa horey u soo jeediyey digniin ku wajahan in gabi ahaanba la joojiyo dhismaha wadadan, waxaana ay wararku kala duwan sheegayeen in ay Shabaab doonayaan dhaqaale ay ka helaan mashruucan dhismihiisa oo ay sheegeen in ay dawladdu canshuur ka qaaday, laakiin taasi ayaa ahayd mid ay welwel ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed.
Mashruuca dibu dhiska ayaa dib loo bilaabay ka dib ku dhawaad mudo bil ah oo uu xanibnaa, waxaana bilaabidiisa hadda la sheegay in ay jirto Canshuur ama laaluush la siiyey kooxda xagjirka ah ee Al- Shabaab, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo dhinacyo kala duwan.
Qof ka gaabsaday magaciisa xog badana kala socda arrimaha dhismaha wadadan, ayaa u sheegay warbaahinta madaxa banaan in ilaa hadda uu og yahay is afgarasho dhexmartay labada dhinac ee qandaraas qaataha iyo Al- Shabaab, gaar ahaana ay jirto lacag lays dhaafsaday.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay kooxdan dalbatay aduun gaaraya Boqolaal Kun oo Dollar, taas oo ay ku sheegtay in ay tahay Canshuurtii Qandaraaskan, waxaana dad badan la yaab ku noqday amarada Al- Shabaab ee hadda ku wajahan raadinta dhaqaalaha.
Ugu dambeyn dibu dhiska mashruuca ee wadada ayaa dib u bilowday, taas oo ah mid ay soo dhaweeyeen dad badan oo ay kamid yihiin Shaqaalihii ka shaqeynayay,waxaana talaabadan loo arkaa mid horumar leh, in dib loo bilaabo, iyadoo qorshuhu yahay in la dhiso dhammaan meelaha burbursan ee wadada Jowhar & Muqdisho oo dhan 90KM.
DHAGAYSO:Gudoomiye ka tirsan P/ntland oo arin cajiib leh u bandhigay ciidamada Spain
DAAWO:Gudoomiyaha gobol Bari oo ka dalbaday shacabka P/land in ay wax weydiistaan Dowladda Somalia
Khayre oo la kulmay xoghayaha Maaliyadda ee dalka Maraykanka
DAAWO:Ciidamada Nabad sugida oo gacanta kusoo dhigay dhalinyaro badan oo….
DAAWO:Somaliland oo khatar adag wajahaysa & Muuse Biixi oo lagu eedeeyey in uu wado…